दलान नेपाल : .....सोच्नै पर्छ श्रीमान, त्यस्तो होईन श्रीमान ?
.....सोच्नै पर्छ श्रीमान, त्यस्तो होईन श्रीमान ?
यदी यो मुलुकमा १० ओटा सिके राउत पैदा भयो भने, यो मुलुकको हालत के हुन्छ, श्रीमान ? आईतवार विशेष अदालतमा सिके राउतको सुनवाईको क्रममा सरकारी वकिलले वहस क्रममा बोलेको वाक्यांश हो यो । सरकारको तर्फवाट राज्य द्रोहको मुद्धामा विशेष धाईरहेका सिके राउतलाई जन्मकैद हुनु पर्छ भन्ने सरकारी दाबी हो । आईतवार सरकारी वकिलले विशेषमा बहस गर्दै भन्दै थिए, डा सिके राउत विद्धान हुनुहुन्छ, उहा यो मुलुककै अमुल्य सम्पति हो तर उहांले लेख्नु भएको किताब तथा उहाको केही गतिविधीले अनेकन शंका उपजाएको छ । त्यसैले यसवारेमा हामीले गम्भिर भएर सोच्नै पर्छ श्रीमान ?
त्यस पछि राउतको तर्फवाट बहस गरेका सुनिल रंजन सिंहले एक स्वरमा भने, त्यस्तो होईन श्रीमान ? शंकाले लंका जलाउछ । तपाई हामी सवैको विच सबै कुरा छरपष्ट छन । अदालत पनि समाजकै अगं हो, त्यसैले हामी यो सम्मानित अदालतले राउतलाई सफाई दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ ।
आईतवार राउतको सुनवाईको क्रममा एक जना सरकारी वकिलले धारणा राखेका थिए भने, दुई जनाको राउतको तर्फ वाट । सुरुमा सरकारी वकिलले वहस गरिसके पछि बोलेका थिए दुई जना राउतको वकिलहरुले । त्यस पछि राउतको पक्षमा बोल्ने धेरै वकिलहरु भए पछि न्याधिशले वहसलाई धेरै नलम्याउन आग्रह गरे र भने, तपाईहरु कुरा नदोहरिने गरी मिलाएर आउनुस, यसलाई धेरै नलम्बयाउ । अर्को दिन यसलाई हामीले टुग्याई देउ ।
आईतवार सिके राउतको विशेष अदालतको सुनवाई प्रति सर्वत्र चासो वढनु स्वभाविकै थियो । किनकी यस अघि नै न्याधिशहरुले अव यो मुद्धालाई टुग्याइदिने बताएका थिए । तर आईतवार फेरी आउदो विहिवार को लागी मिती तोकिएको छ ।
गएको मंसीरमा धरौटिमा रिहा भए पछि राउत लागातार विशेषमा धाईरहेका छन ।